Mai Chibwe VekwaZimuto: Kangani pavhiki nomurume?
Vanhu vakawanda vanoti kana vepa Next door vakatenga mota ivo vodawo mota tsva. Kana vakaita mwana ivo vodawo mwana, kana vakachinja mabasa ivo votangawo kutsvaka mabasa. zvichingoenda zvakadaro Ndosaka uchihwa vakawanda vachibvunza kuti toita rhoji kangani pavhiki. Mubvunzo uyu unobva pakuda kukwikwidzana naana Nhingi panyaya iyi. Mubvunzo uyu hauna mhinduro yaunoda asi kungoti kumba kwenyu itai sokuda kwenyu.
Chikuru kugara wakagutiswa noumwe wako iwewo uchimugutsa. Mudzimba dzakawanda vaviri ava havadi zvakafanana. Zviri nyore kana murume achida kakawanda kupfuura mukadzi pane kuti mukadzi ade kupfuura murume. Isu vakadzi tinogona kungovhurira murume oita hake ini ndange ndisana basa nazvo rakawanda. Anonakigwa ini ndonakigwawo asi ndisingadi kupedza. Hino kana mukadzi achida, murume asingadi kana kuti asingagoni zvinonetsa
Kana ari murume anoziva kuti zemo remukadzi rinofanira kutoti ripedzwe, anokurega uchipurudzira chombo kusvika chamuka iwe wokwira murume womuita kusvika mese makwana. unoona futi kuti kana ane unyope hwekuita anonoka kupedza zvinoreva kuti zvinotonaka kupfuura kana ane zemo guru. Chinongozosiyana ndechokuti vamwe vedu tinodawo kuitwa zvine simba mukati nokuti fungwa dzinoti chombo ndicho chinesimba. hakuna mukadzi asingapi rukudzo kuchombo chinehasha pamaitire acho muchitubu.
Usazvinetsa nokuti moita kangani pavhiki. Ukaenda kuChurch ukaona mai vanongoshama n'ai nguva dzese ziva kuti vavata vari pachibharo cherhoji. Unoona vakapfava hana, murume wavo ari munhu anomufaro. Zivazve kuti mumba mavo hamuna kupopotedzana.
Itai sokuda kwenyu, pangodira umwe wenyu umwe obvumawo kuita. Ndizvo chete. Isu vechitema tinoda kugaroitana. Ku USA kwahi vatema vanoda rhoji kupfuura mamwe marudzi. Kwedu kumusha tinoda kuvatana kakawanda. Zvikuru mazuva okotanga munogona kuita katatu pazuva, kana kupfuura, kana pasina vanosvika pamba penyu vachikudhisitebhai. Ndorangarira mazuva ekutanga tichingoitira chero, mumota, mukicheni, mubhavhu, mugaraji,mumba yokugara, chero pawabatira murume ipapo usamunonokera kana kumuhwira tsitsi. Kana uchimwa mapiritsi okudzivirira mimba unomwira kuti urhojewe usingaiti mimba kwete kuti unoda mapiritsi. Saka hazvibatsiri kumwa mapiritsi woshaya anorhoja wacho, murume wako aripo. Kana akaneta iwe kwira pamusoro iye azorore ari pasi. Unotoona achiwedzera kunonoka zvotowanza kunaka kwacho.
Hakuna munhu akamboendeswa kuchipatara achiti awanzisa rhoji. Vanhu vashomanana vanokomburena kuti waakaroorana naye anoda kuita zvakawandisa.
Kunozoti maita mwana mombomira asi motanga futi moita zvinokwanisika. Mukabvisa TV mumba mokasira kuvata munowanza rhoji.TV dzinorezva vanhu nenyaya dzisingavaki musha kusvika manonoka kuvata mozonovata makaneta zvokuti kurhojana kunoita kushoma. Ndosaka vanhu vakawanda vachifunga kuti TV iCONSPIRACY yaSATANI kuti mhuri dzisavakwa zvakanaka.
Ukajaidza muviri wako kugaroita rhoji, uchaona kuti unogaroda rhoji nguva nenguva. Ini sokuona kwangu munhu ari pasi pemakore 35 anowanza pavhiki zvokuti unopfuura ku15. Vamwe vanopfuura ikoko. Sokuti matorana mukaenda kuHOLIDAY musina zvimwe zvokuita, munokwanisa kuswera muHOTEL room. Hautombopfeki bhurugwa ipapo.
Mishonga yokumwa kuti chombo chirambe chakamira.
Ini sokuona kwangu ukajaira kumwira chombo chako mushonga wakaita seVIAGRA, unokwanisa kuzvikuvadza nazvo. Murume ane utano hwakakwana haambodi zvokumwa mushonga kuti chombo chimire. Chinongomira chega pachadira kumira. Itai ipapo. Zvemishonga izvo bodo, unopedzisira wava nezvimwe zvigwere zvisingafaniri.
KuZimbabwe kune midzi inotengeswa inohi murume akatsenga anokwanisa kuvata usiku hwese akangomira. Handifungi kuti zvinobatsira chinhu izvozvo. Kana uri munhu anounyanzvi pabasa rako mumba, siyana nezvemishonga izvi. Chengeta utano chete uye gara uri munhu ane mufaro. Uchaona kuti muviri wako unokuudza kana woda kuvatana noumwe wako. Iwe kana waudzwa chirega kuita nharo. Enda unoita zvinoda muviri.
Asizve kuzopedza zuva rese usina kumbodawo kuvatana nomurume/mukadzi wako hazvifaniri. Zvikuru kunesu vakadzi. Ukajaira kusavata nomurume unopedzisira usisanyorovi pakuvatana. iri idambudziko guru kune vakadzi vakawanda. Kana unaro uchaona kuti zvokuvatana hauchazvidi nokuti zvinogwadza. Munhu jairawo kugarovatana noumwe wako.
Iko kuvatana kwacho kunodzivirira zvigwere zvakawanda chose mumuviri wemurume/mukadzi zvokuti dai vanhu vainyatsa kuhwisisa nyaya dzacho vaitoonawo rhoji semushonga weupenyu. Munhu anowana rhoji inogutsa munhu anogara hana yakapfava uye ane mufaro. Stress inoita shoma saka zvinhu zvakaita semusoro, mamwe ma CANCER, maUlcer, Depression, Mental illness, Neurosis, Incontinence, Obesity, Eating disorders, etc zvinoita zvishoma. Kuvarume zvinohi murume asingawanzi rhoji anononoka kuita Prostate Cancer. Murume akagarowana rhoji yakawanda mumba haakori kuita rimwe zimuviri rinotyisa. Vakadziwo akaBALANZA kudya kwake nokurhojewa kwake zvakanaka anochengetedza muviri wake zvakanaka. Zvinohi ganda romukadzi kutsetseka kwaro kunowedzera kana achigarorhojewa. Kozotizve kune vamwe vanogadzira ma FACE MASK aya ekuzora kumeso kuti kuve neganda rakanaka. Kunohi ukawanzoti mapeda wotora urume huya hunochururuka muchitubu uchizora kumeso zvinobatsira ganda.
Kana tichiti wanzai rhoji mumba tinoreva kuti kana mese murume nomukadzi mune utano hwakakwana, uye makore enyu ari pasi pe 35 okuberekwa, kazhinji murume anokwanisa kurhoja kaviri pazuva. Vakadzi havana pavanoti vane dambudziko mukadzi anokwanisa kurhojewa kana kagumi pazuva. Mukadzi kungoshaya hako zemo nokuda kwekuguta asi kana murume wake ada kumukwira, hapana chaangati chinomukonesa. Angazotadza hake kuita chikapa nokuneta asi anokwanisa kungovhurira murume, murume oita zvaanoda, nyaya yopera yakadaro. Varume ndivo vane dambudziko rokushotesa zvinhu mumba.
Hakuna munhu akambohi akaita dambudziko nokuti anga awanzigwa rhoji mumba make. Asi vakawandisa vanhu vakaita nyaya kusvika pakurambana nokuda kwekusawana rhoji yakakwana. Vanotogarisana dare nehama kutonga nyaya dzakadaro.
Posted by Mai E Chibwe at 08:14